Iyelenqe lezidenge: ngubani owabhalayo, lithetha ntoni malunga nezinto ezinqwenelekayo | Uncwadi lwangoku
Encarni Arcoya | 23/07/2021 08:00 | Iincwadi
Ngaba ukhe wafunda Ukudityaniswa kweececiuos? Ngaba uyazi ukuba imalunga nantoni? Mhlawumbi ngumzuzu xa ufunda ibali apho ulinganisa indlela abantu ababehlala ngayo kunye nendlela okwenziwa ngayo ngoku, inveli equka ukugxekwa koluntu ngumbhali owayeziva engafanelekanga.
Ke siza kubalisa, ewe ngaphandle kokukuxelela isiphelo, yonke into oza kuyifumana kule ncwadi.
1 Ngubani obhale iyelenqe lezidenge
2 Liyintoni iyelenqe lezidenge malunga nalo
2.1 Isishwankathelo sencwadi
3 Sisiphi isimbo kunye nolwakhiwo esinalo
Ngubani obhale iyelenqe lezidenge
Umbhali Ngubani esimtyala iyelenqe lezidenge nguJohn Kennedy Toole. Wazalelwa eNew Orleans ngo-1937 kwaye wasweleka kwiminyaka engama-31 kamva, ngo-1969. Incwadi yakhe zange ipapashwe esaphila, kodwa yapapashwa emva kokuba efile (ngo-1980) waze wafumana iPulitzer Prize for fiction ngo-1981.
UJohn wayengunyana kaJohn kunye noThelma Toole, abazali abakhuselayo kunyana wabo, ngakumbi umama wakhe, owayengakwazi ukumvumela ukuba adlale nabanye abantwana. Oko kwamenza ukuba ajike kwizifundo zakhe kwaye wayengumzekelo ongumfundi. Waphumelela kwiYunivesithi yaseTulane kwaye wagqiba i-BA ngesiNgesi e-Columbia. Emva koko, waqala wasebenza njengoprofesa oncedisayo wesiNgesi kwiDyunivesithi yase Mzantsi-ntshona eLouisana unyaka.
Ukusuka apho waya eNew York, ukuya kuthatha isikhundla sokufundisa eHunter College.
Nangona kunjalo, akazange alahlekelwe ngumsebenzi wakhe woqeqesho, njengoko wayezama ukufumana ugqirha. Nangona kunjalo, kwakufuneka aye emkhosini, apho wachitha khona iminyaka emibini efundisa isiNgesi kubasebenzi abathetha iSpanish, wamenza wanikezela.
Ukubuya kwakhe emfazweni, waya kuhlala eNew Orleans apho wayehlala nabazali bakhe kwaye waqala ukusebenza eDominican College. Nangona kunjalo, wanceda nabahlobo bakhe (umzekelo ngokuthengisa i-tamales) okanye, emva kokuphumelela ngeembasa kwiYunivesithi yaseTulane, esebenza kumzi-mveliso wempahla yamadoda.
Konke oku wakubamba kwincwadi yakhe, iyelenqe lezidenge, wathi akugqiba wayithumela kwindlu yokupapasha kaSimon & Schuster. Kodwa oku kwalahlwa kuba "kwakungekho nto nantoni na." Emva koko uToole waqala ukudandatheka. Uthathe ukusela, wayeka ukusebenza wagqibela ngokuzibulala eneminyaka eyi-31.
Kwakunjalo Umama wakhe emva koko walwela umntu ofunda umsebenzi wonyana wakhe. Kwaye umntu othile ngu-Walker Percy othe, ediniwe kukunyanzelwa, wakwenza oko, onwabile yile ncwadi. Ngenxa yoko, uPercy wayengumtshayelelo wencwadi. Ngenxa yale mpumelelo, kwahlangulwa enye inoveli eyabhalwa ngumbhali xa wayeneminyaka eli-16 ubudala, awayeyithatha njengembi, iThe Neon Bible.
Liyintoni iyelenqe lezidenge malunga nalo
Kwiyelenqe lezidenge uya kudibana ophambili, uIgnatius J. Reilly. Le ndoda ayilunganga kwaye i-anachronist. Uya kuthanda ukuhlala ngendlela ephakathi, ngeendlela zakhe zokuphila, ngokuziphatha kwakhe, njl. Ke ngoko, ukuba lonke ilizwe live, uthatha isigqibo sokubhala amakhulu eencwadana apho atyhila khona umbono wehlabathi. Incwadi nganye yamanqaku ithatha indawo egumbini lakhe, kungekho myalelo, nangona enenjongo eqinisekileyo yoku-odola. Ngenye imini.
Kuye, umsebenzi uyinto embi kakhulu, into ekufuneka ihlupheke kuba umhlaba ungongxowankulu kwaye uwuthatha njengohlobo lobukhoboka. Ke ugqibela ngokuzithelekisa noBoethius (owamkela ukubulawa kwakhe) kwaye uzimisele ukukhangela umntu aphile. Ukusuka apho, kufundwa ibali lokuba, nangona izokuhlekisa kakhulu, iyakubonisa ngendlela ebaxiweyo, ukuba injani na intlalo yanamhlanje: ngokuzingca kwayo, inkohlakalo, usizi ...
Ngamafutshane, ewe, uya kuhleka nencwadi, kodwa uya kuziva usizi ukubona indlela eliyiyo ilizwe kwaye ukuba le nto ibingafani ngayo, kwaye ibingalawulwa yimigaqo ngoku kubonakala ngathi sonke siyilandele ngokulandelelana «ukuhlengahlengisa" kwaye ube loluntu.
Nantsi ingqungquthela yayo:
Ukudityaniswa kweziyatha yinoveli ephambeneyo, eneasidi kwaye ikrelekrele kakhulu. Ayisiyiyo loo nto kuphela, ikwahlekisa kakhulu kwaye ikrakra ngaxeshanye. Ukuhleka kuyasinda kukodwa phambi kweemeko ezingafaniyo zale ntlekele inkulu. U-Ignatius J. Ngokwenyani mhlawumbi ngomnye wabalinganiswa abaphambili abakhe badalwa kwaye uninzi lwabo aluthandabuzi ukuthelekisa noDon Quixote. Ngapha koko, uyisichasi esichanekileyo senoveli egcwele abalinganiswa abagqwesileyo, ebekwe kwizibuko lesixeko laseNew Orleans, uIgnatius onobuchule.
Akaqondwa kakuhle, umntu okwiminyaka yamashumi amathathu okuqala ohlala kwindlu kanina kwaye osokolayo ukufezekisa ilizwe elingcono ngaphakathi egumbini lakhe. Ngenkohlakalo uya kurhuqwa ukuba azulazule ezitalatweni zaseNew Orleans ekhangela umsebenzi, anyanzelwe ukuba angene eluntwini, nalapho egcina ubudlelwane bokugxeka, ukuze akwazi ukuhlawula iindleko ezibangelwe ngunina kwingozi yemoto ngelixa Ndandiqhuba ndinxilile. Umbhali, uJohn K. Toole, ufumana uphononongo olukumgangatho ophakathi.
Iyakwazi ukugcina umdla womfundi (nokuba mkhulu kokufundwayo kwesibini kunasekuqaleni) noluhlu lweempawu ezingathandekiyo. Akashiyi nopopi unentloko kwaye, ngenxa yobuntu obunobuqhetseba nobugwenxa bukaIgnatius, unika uphononongo lwexesha awayehlala ngalo kwithoni ehlekisayo eyahlukileyo kumbono olusizi wobomi babalinganiswa ababonisiweyo. Asifumani nje ibali eliphambeneyo nelothusayo lokugxekwa eluntwini, kodwa iyelenqe liloya kwasekuqaleni. Umzuzu apho, njengoko umlinganiswa ophambili esitsho, iFortuna ijikisa ivili layo ezantsi kwaye ngekhe sazi ukuba yeyiphi into engathandekiyo esingayilindelanga.
Ukusuka apha, ezinye iimeko zixhuma nabanye, njengoko abalinganiswa besenza, kwaye kwakhiwa ibhola enkulu yekhephu eya kuthi ekugqibeleni iqhume ekugqibeleni kwinoveli. Emva kokugqiba iLa Conjura De Los Focios, eneminyaka engama-32, umbhali wazama ukuyipapasha. Oku kukhokelele kuxinzelelo olunzulu olukhokelele ekuzibulaleni. Ngombulelo kukuqina nokunyanzelisa kukanina, namhlanje singonwabela lo msebenzi umnandi onikwe imbasa yePulitzer. Sinokufumana kwakhona ipapashwe yiNeon Bible, inoveli eyabhalwa xa umbhali wayeneminyaka eyi-16.
Sisiphi isimbo kunye nolwakhiwo esinalo
Inoveli yahlulwe yazizahluko, zona zona zahlulahlulwa zizahluko ezizayo. Bonke Bakumntu wesithathu kwaye isigqebelo siyinxalenye yesicatshulwa. Nangona kunjalo, kukho iindawo ezithile oza kukwazi ukuzifunda kumntu wokuqala, ukuba ngumbono ka-Ignatius. Oku kunceda ukuqonda umlinganiswa kunye nebali ngokwalo. Ezi yinxalenye yeencwadana zokubhala azibhalayo, kunye neeleta azibhalayo nomhlobo wakhe, uMyrna Minkoff, athe wangqubana naye nombono wakhe wehlabathi, kodwa kwangaxeshanye uziva ukuba uyayigqiba.
Abaninzi bacinga njalo Ibali lePlani yeziyatha linobomi obuninzi bukaJohn Kennedy Toole, eza ukubonisa iinxalenye zebali lakhe, hayi kuphela ngenxa yendawo yomlinganiswa, kodwa nangenxa yemisebenzi eyahlukeneyo ayenzayo, okanye ngenxa yolwalamano analo nonina. Nokuba umnqweno lowo kuba oko akubhalayo kusebenza ukutshintsha inyani okanye umhlaba.
Ngoku ekubeni usazi ngcono iyelenqe lezidenge, uyakubona ukuba yinoveli engaphelelwa lixesha, enokusetyenziswa kolu luntu njengakwixa elidlulileyo okanye kwikamva, kwaye umlinganiswa ngokwakhe akwenze ukuba ujongane nombono wakhe , iyindida kwaye ikhohlakele, yehlabathi. Ngoku, nokuba ebelungile okanye hayi uya kuxhomekeka kuphela kuluvo lwakho. Ngaba ukhe wayifunda? Ngaba uza kuzama?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Ukudityaniswa kweececiuos